Kenya: Muxuu sameeyay darawalkii rakaabkiisa ka badbaadiyay 'weerarka al-Shabab?' - BBC News Somali
Kenya: Muxuu sameeyay darawalkii rakaabkiisa ka badbaadiyay 'weerarka al-Shabab?'
24 Oktoobar 2019
Xigashada Sawirka, Nation Media Group
Gaari nooca dadweynaha qaada ah oo ka shaqeeya Mandheera
Warbaahinta dalka Kenya, oo ay ka mid yihiin wargeysyada Daily Nation iyo The Standard ayaa maanta si weyn u hadal haya sheeko ku saabsan darawal gaadiidka dadweynaha kaxeeya oo rakaab uu waday ka badbaadiyay isku day weerar oo ay la damacsanaayeen koox ka tirsan Al-Shabaab, ismaamulka Mandheera.
Darawalkan oo ka howlgalayay koonfurta Mandheera ayaa lagu soo warramay inuu badbaadiyay 8 ruux oo saarneyd gaariga uu waday, kaasoo ay dabley lagu tuhunsan yahay Al-Shabaab bartilmaameedsanayeen.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in ninkan oo aan magaciisa loo shaacinin sababo amni dartood uu gaariga si xoog ah ula cararay ka dib markii ay qiyaastii 10 ruux oo laga shakiyay u gacan haatiyeen, iyagoo doonayay inuu gaariga joojiyo, xilli uu maqribnimadii Arbacada ku safrayay waddada u dhaxeysa deegaannada Ceelwaaq iyo Borehole 11 ee ka wada tirsan ismaamulka Mandheera.
Markii uu ka dhaga adeygay inuu gaariga joojiyo, kooxda lagu tuhmay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen ayaa rasaas aan loo meel dayin oodda uga qaadday gaariga, taasoo sababtay inay hal lug ka qaraxdo.
Maxaa sababay in Al Shabaab ay kordhiso dhaqdhaqaaqyadeeda?
Weerarrada Kenya ee Al-Shabaab marka la barbar dhigo gobolka intiisa kale
Ma jirin cid wax ku noqotay dhacdadaas, sida uu sheegay guddoomiyaha dhinaca amniga ee ismaamulka Mandheera, Onesmus Kyatha.
"Gaari waday shaqaale ka tirsan kuwa dhismaha sameeya, oo kasoo baxay deegaanka Borehole 11 ayey xalay beegsadeen koox lagu tuhunsanyahay Al-Shabaab, laakiin darawalkoodii ayaa badbaadiyay", ayuu yidhi Mr Kyatha.
Sarkaalkan ayaa ficilka uu darawalkaas sameeyay ku qeexay 'geesinnimo'.
Mr Kyatha ayaa sheegay in gaarigaas uu u kireysnaa shirkad dhismaha ka shaqeysa, taasoo xarun caafimaad ka dhiseysa deegaanka Borehole 11, wuxuuna shaqaalaheeda isaga kala gooshin jiray goobta uu dhismaha ka socdo iyo magaalada Ceelwaaq.
"Darawalku wuxuu kasoo jeeday deegaanka, laakiin inta badan shaqaalaha markaas la socday waxay ahaayeen kuwo aan kasoo jeedin deegaanka, waxaana aaminsan nahay in iyaga la bartilmaameedsanayay", ayuu yiri sarkaalka, oo u warramay warbaahinta maxalliga ah ee Kenya.
Wuxuu intaas ku daray in boolisku ay hadda baaritaan ku hayaan dhacdadaas.
Deegaanno ka tirsan Mandheera ayaa horay looga fuliyay weerarro lagu dilay dad aan deegaanka kasoo jeedin, waxaana mas'uuliyaddooda sheegatay Al-Shabaab.
2-dii bishii Disembar ee sannadkii 2014-kii, koox hubeysan ayaa xilli aroor hore ah weerar ku qaadday goob hoy u ahayd shaqaalaha dhagaxa qoda ee magaalada Mandheera.
36 ruux oo u badnaa dad aan Muslim ahayn ayaa lagu dilay goobtaas, ka dib markii ay dableyda rasaas oodda uga qaadeen, waxaana weerarkaas mas'uuliyaddiisa durba sheegatay Al Shabab.
Dhacdadaas ayaa cirka ku sii shareertay cabsi dhinaca ammaanka ah oo ay dadka aan muslimiinta ahayn ka qabeen deegaannada ka tirsan gobolka Waqooyi bari ee ay Soomaalida dagto.
Weerar kale oo sidaas loogu bartilmaameedsaday dadka ka shaqeeya qodista dhagaxa dhismeyaasha ayaa bishii Luulyo ee sannadkii 2015-kii lagu dilay 14 ruux oo ka mid ah shaqaalaha dhagax qodeyaasha ah.
Shacab ka hortagay Al-Shabaab hubeysan
Xigashada Sawirka, Standard Digital
Qaar ka mid ah xubnaha Al-Shabaab
Bishii July, Ugu yaraan 3 nin oo hubeysan ayaa isku dayay inay weerar ku qaadaan goob uu ka socday dhismaha isbitaal maxalli ah, iyagoo "damacsanaa inay halkaas ku laayaan dadka aan deegaanka kasoo jeedin".
Balse kahor inta aysan goobta gaarin ayey qaar ka mid ah shacabka deegaanka ku wargaliyeen shaqaalihii dhismaha waday inay halkaas isaga cararaan, sida uu shaaciyay wargeyska Standard ee dalka Kenya.
Booliska iyo goobjoogeyaal uu soo xigtay wargeyska ayaa sheegay in qiyaastii 20 shaqaale ah ay halkaas ku sugnaayeen.
Sidoo kale markii ay ragga hubeysan u dhaqaaqeen dhinaca goobta uu dhismaha ka socday, waxaa ishortaagay shacab badan oo u sheegayay inaysan meeshaas joojin cid aan deegaanka kasoo jeedin.
TOOS Turkiga oo qorsheynayo in uu sameeyo howlgal milatri
Malaayiin Muslimiin oo loo ciqaabo maxaad u cibadeysataan!
53 Daqiiqadood ka hor
'Waxa nakala qabsaday aniga iyo gacan ku dhiiglayaashiI aabbahay dilay'
Shanta arrimood uu Famaajo uga duwan yahay madaxweynayaasha kale
Afar arrimood oo laga filayo Farmaajo Villa Soomaaliya kaddib
Magaalada Ukraine ee iska caabbisay duullaanka Ruushka